सन्दीप पाकिस्तान प्रिमियर लिगमा पनि छनोट, ५० लाख बढी पारिश्रमिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
सन्दीप पाकिस्तान प्रिमियर लिगमा पनि छनोट, ५० लाख बढी पारिश्रमिक !
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) को अक्सनबाट छनोट भएका छन् । उनी लाहोर क्लान्डर्स क्लबमा छनोट भएका हुन् । सन्दीप गोल्ड क्याटागोरीबाट छानिएका छन् ।
डाइमण्ड, गोल्ड, सिल्भर र इमर्जिङ गरी ४ वर्गमा खेलाडीको वर्गीकरण गरिँदा सन्दीप विदेशी खेलाडी कोटाबाट गोल्ड क्याटागोरीमा परेका थिए भने पहिलो पटक विदेशी लिगको ड्राफ्टमा परेका सोमपाल सिल्भर क्याटेगोरीमा छन् ।
याे पनि पढ्नुस बीबीएलः मेलबर्न सेमिफाइनलमा प्रवेश, सन्दीपले लिए ३ विकेट
सन्दीप छनोट भएसँगै उनले ५० र ५७ लाखको बीचमा पारिश्रमिक पाउने छन् । यस्तै, सिल्भर विधामा रहेका सोमपालमाथि बोली लागेमा उनको न्यूनतम मूल्य २२ हजार डलर रहेको छ । पछिल्लो पटक एकपछि अर्को विदेशी लिगहरुमा व्यस्त सन्दीप यतिबेला दुबईमा हुने टी–१० क्रिकेट लिग खेल्न गएका छन् ।